धेरै मानिसहरू अनुहार मा कमीकमजोरी छन्। मुखासे को Peeling छाला अवस्था सुधार प्रभावकारी प्रक्रिया हो। तिनीहरूले घटना लागि विभिन्न कारणहरू छन् किनभने मुखासे फरक हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक रोगको लागि यसको आफ्नै प्रक्रिया प्रदान गर्दछ।
मुखासे को कारण
मुखासे - कुनै पनि उमेर मा एक बारम्बार समस्या। आफ्नो उपस्थिति फरक कारक कारण हो। सबै दोष को ब्यूटी पार्लर मा उपचार छैन। त्यहाँ दबाइ चाहिन्छ भनेर एन्टिबायोटिक कमीकमजोरी छन्।
तपाईं मुखासे देखि peeling गर्न सक्छन् कि निर्धारण, डाक्टर मई, कारण को स्थापना पछि। को बेफाइदा को उपस्थिति को मुख्य कारक समावेश:
ingrown hairs र सुनिंनु;
संक्रमण र चोट;
मुखासे देखि peeling प्रदर्शन गर्नु अघि, तपाईं एक त्वकरोग परामर्श गर्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीं यो प्रक्रिया बिगार्न र स्वस्थ छाला रोग फैलाउन सक्छ।
प्रयोग गर्न प्रक्रिया के हो?
जब मुखासे लागि समस्या छाला peels एक अनिवार्य प्रक्रिया हो। यो keratinized पत्रहरू, धूलो र तेल, को वसामय ग्रंथिहरु को रिकभरी देखि छाला उपचार गर्न आवश्यक छ। यी परिवर्तनहरू संग, जीवाणुहरु विकास गर्न सक्दैन, त्यसैले तिनीहरू गायब। साथै, प्रक्रिया छाला taut हुन्छ, मुखासे scars हटाउँदछ र सेल नवीकरण regenerates, राम्रो-groomed।
त्यहाँ कस्मेटिक्स मा peelings विभिन्न प्रकारका छन्। तिनीहरूले बाहिरको मध्य र गहिरो छन्। यो जोखिम स्तर vastness र सुनिंनु को जटिलता आधारित चयन गरिएको छ। सबै भन्दा लोकप्रिय सतह उपचार हो। तिनीहरूले बारम्बार inflammations लागि आदर्श हो। प्रक्रिया साफ सतह र pores द्वारा, वसामय ग्रंथिहरु कम छ, त्यसैले तिनीहरू मुखासे र blackheads को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ।
औसत peels शायद उनि सामान्यतया scars र मुखासे निशान हटाउन आवश्यक प्रयोग गरिन्छ। गहिरो सफाई एक जटिल प्रक्रिया हो, त्यसैले अक्सर प्रदर्शन छैन। त्यहाँ पद्धति मा मतभेद र जोखिम को विधि हो। तसर्थ, peeling हार्डवेयर, रासायनिक, यांत्रिक छ। यो विविधता कारण व्यक्तिगत छाला शुद्ध पार्नुभएर लागि विधि चयन गर्नेछ।
यो प्रक्रिया मुखासे हटाउन प्रभावकारी exfoliation छ। यसको peculiarity स्वस्थ छाला एक संक्रमण विरुद्ध सुरक्षा, समस्या एक अचाक्ली प्रभाव छ। अनुहार सफाई विभिन्न विधिहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन्। हार्डवेयर cosmetology मा Peeling निम्न प्रजाति छ:
लेजर - मृत छाला कक्षहरू उन्मूलन, लेजर बीम को सुनिंनु। भित्री पत्रहरु मा लेजर समस्या हटाइ, थर्मल प्रभाव प्रदान गर्दछ। यो विधि को मुख्य लाभ को epidermis को न्यूनतम चोट हुन मानिन्छ। यो पुनर्वास अवधि कम गर्न आवश्यक छ।
अल्ट्रासोनिक - अल्ट्रासोनिक लहर। त्यहाँ जो रगत प्रवाह पुनस्थापित, अप्रचलित कक्षहरू समाप्त अनुहार, को अल्ट्रासोनिक सफाई को लागि एक विशेष उपकरण हो। को pores वसामय प्लग, धुलो, कस्मेटिक्स को शुद्ध छन्। अनुहार को अल्ट्रासोनिक सफाई को लागि प्रयोग र छाला निको सुधार उपकरण।
हार्डवेयर cosmetology प्रभावकारी मुखासे निर्मूल गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक peeling पटरिहरु देखि मुखासे पछि प्रयोग गर्न उचित छ। सफा गर्न, प्रयोग उपकरण, विशिष्ट कार्यक्रम को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ उमेर छाला गर्न क्षति को डिग्री दिइएको।
अनुहार लागि रासायनिक peeling माग। समीक्षा नाजुक, कम प्रभाव कार्य सुझाव। exfoliation - यस्तो लागूपदार्थ एक exfoliant र प्रक्रिया रूपमा उल्लेख छन्। उनीहरू त्यहाँ आधारित छन्:
अल्फा-hydroxy एसिड - वृद्ध देखि छाला रक्षा गर्न प्रयोग।
बिटा-hydroxy एसिड - लागूपदार्थ मुखासे राहत।
salicylic एसिड प्रयोग
छाला तेल छ भने, यो रासायनिक बोक्रा अनुहार लागि सिद्ध छ। समीक्षा प्रक्रिया को प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुहोस्। Salicylic एसिड podsushivayuschee र निस्संक्रामक कार्य छ। छाला मा यो पदार्थ संग लोशन वा क्रीम लागू गर्न आवश्यक छ। प्रक्रिया प्रभाव बिस्तारै हुन्छ।
समय, छाला pigmentation कुनै खतरा संग, शुद्ध छ। केबिन Peeling बाहिरको र औसत छ। ब्यूटिशियन इच्छित एकाग्रता को संरचना छनोट र प्रक्रिया पछि छाला हेरविचार प्रदान गर्दछ।
Glycolic एसिड एक जीवाणुरोधी प्रभाव छ, यो सुनिंनु र छाला टोन समाप्त। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधा वसामय ग्रंथिहरु को साफ आउट को क्षमता हुन मानिन्छ। प्रक्रिया comedones र वसामय प्लग समाप्त।
समीक्षा ठूलो प्रभाव succinic एसिड र फल को एक मिश्रण संग peeling हो भन्ने। यसलाई प्रभावकारी मुखासे तपाईं एसिड को उपयुक्त एकाग्रता चयन गर्न आवश्यक हटाउन रूपमा काम beauticians प्रदर्शन कि मनमोहक छ।
प्रक्रिया छाला शुद्ध पार्छ र glycosaminoglycans, कोलेजन फाइबर को संश्लेषण बढावा। यो विधि यो ताजा थप सफा छ, परिपक्व छाला, को लागि आदर्श छ।
मुखासे को निशान चिकना गर्न प्रयोग विधि। Retinoic peeling क्षतिग्रस्त epidermis को exfoliation प्रदान गर्दछ। sebum को उत्पादन पुनस्थापित प्रक्रिया, यो pustular formations को रोकथाम लागि प्रभावकारी हुन्छ।
यस्तो peeling मुखासे निको, ताजा हुन्छ जो छाला, rejuvenates। यसको आवेदन भाग एक दाना हुन सक्छ छाला को सूक्खापना गराउँछ, र कहिले काँही रूपमा, प्रक्रिया दुरुपयोग छैन।
को सींग तहहरू समाप्त हो र pores यांत्रिक सफाई प्रयोग गरेर भरा प्राप्त। घर्षण घटक प्रभावकारी छाला अद्यावधिक, समस्या माथिल्लो तह हटाउन।
यो प्रविधी दाग हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ , मुखासे scars को असमान। प्रक्रिया पीडादायी हुन मानिन्छ, र यो कवर पुनर्स्थापना गर्न समय लाग्छ। छाला को यांत्रिक सफाई पछि dimples र धक्का हुने छैन।
कसरी अक्सर सानो घर मा peeling के? यो एक निरीक्षण पछि ब्यूटिशियन परिभाषित। तपाईं खातामा छाला को सुविधाहरू लिन भने, यो केवल अनुमानित निष्कर्ष उपचार को आवृत्ति बारेमा कोर्न सकिदैन छ। केबिन peeling एक हप्ताको2पटक गरेको छ।
तर केही छाला प्रकार अप 8 उपचार गर्न आवश्यक छ। एक पटक छाला रिकभर गर्न अनुमति दिने, एक ब्रेक आवश्यक पाठ्यक्रम बित्यो। त्यसपछि सबै राम्रो परिणाम लागि पटक-पटक गर्न सकिन्छ।
घर उपचार को आवृत्ति
यांत्रिक peeling स्वतन्त्र 16-18 वर्ष देखि प्रदर्शन गर्न सक्छन्। 30 वर्ष पछि यो छाला को ताजगी संरक्षण गर्न अनिवार्य छ। व्यञ्जनहरु Scrubs र peels भिन्न छन्। तर अक्सर पनि प्राकृतिक संरचना भने, प्रक्रिया हुँदैन प्रदर्शन। त्यहाँ प्रक्रियाहरु को निम्न प्रकार छन्:
peeling तेल छाला को लागि एक हप्ताको2पटक गर्नुपर्छ। जबकि दुर्लभ purifications परिणाम देख्न सक्छ तपाईं अक्सर गर्न यस sebum एक तीव्र उत्पादन हुन सक्छ आवश्यक छैन,। छाला कमजोरीहरू कफी मैदान, नुन र चिनी स्क्रब संग उत्कृष्ट मद्दत गर्छ।
छाला सुक्खा छ भने, यो peeling कम गर्न आवश्यक छ। यो एक कोमल र अप्रसारक साफ, दलिया, मह आधारमा तयार छ जो आवश्यक छ।
छाला मिश्रित विशेष उपचार आवश्यक छ। हरेक हप्ता, यो peeling blackheads हटाउन ई-क्षेत्र प्रदर्शन गर्न मनमोहक छ। आवश्यक रूपमा बनाइने peeling प्रदर्शन। उत्कृष्ट साफ गहुँ चोकर, चिया पात।
सामान्य छाला को लागि घर अझ उपयुक्त peeling। यसलाई उच्च गुणवत्ता कस्मेटिक उत्पादनहरु प्रक्रिया गर्न सम्भव छ, र अतिरिक्त खट्टा क्रीम वा क्रीम जई गुच्छे संग को एक मिश्रण संग यसको पलिश। प्रदर्शन सफाई हरेक4दिन हुनुपर्छ।
पनि हल्का peeling छाला संग घाइते गर्न सकिन्छ। तपाईं, यो दुरुपयोग हुँदैन अन्यथा आवरण रिसले बन्न सक्छ, overdried। यांत्रिक peeling गिरावट र हिउँदमा प्रत्येक हप्ता बाहिर र दुई पटक गर्न सकिन्छ। सैलून प्रक्रियाहरु को एक आवृत्ति विजार्ड सेट। यी नियमहरू प्रयोग गरेर यसलाई हानिकारक बिना छाला को अवस्था सुधार हुनेछ।
को Dermaroller ™: समीक्षाएँ beauticians र ग्राहकहरु
कसरी आफ्नो टाउको मा बाल मा मुखासे उपचार गर्न?
Blackheads र झुर्रियाँ को मास्क: "Polisorb" कसरी प्रयोग गर्ने
Zucchini को राम्रो अनुहार मास्क
मेलमिलाप लागि षडयन्त्र राम्रो छ, तर तपाईं प्रयास गर्न आवश्यक र
कार्यशाला: कसरी आफ्नै हातले सपना एक मास्क बनाउन
गाढा प्राण, मानवता: वर्णन, किन
"यूराल-5323": प्राविधिक विनिर्देशों
यो श्रृंखला "Thrones को खेल" सिजन 6: समीक्षा, जारी मिति, अभिनेता